Best Plastic Glasses Frames ကျောကိုငျးမကျြမှနျကောငျးရှေးမလဲ - A Hla Thit
ဘာကြောင့် ကော်ကိုင်းမျက်မှန်တွေက ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာလဲ
Choose better plastic glasses for better lifestyle.
ဒီနခေ့တျေမှာဆိုရငျ မကျြမှနျတှဟော ရှေးခယျြစရာမြားမြားရှိလာပွီးတော့ ဒီဇိုငျးပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ဈေးကှကျမှာရရှိလာပါပွီ။ ဒီထဲကမှ ကျောကိုငျးမကျြမှနျတှကေ ဘာလို့ရှေးခယျြစရာကောငျးတဈခုဖွဈနတောလဲဆိုတာပါ။ ဒါကတော့ ဒီလိုရှိပါတယျ။ 😊
ကျောကိုငျးတှဟော ဓာတုတိုကျစားမှုဒဏျကိုခံနိုငျရညျရှိပါတယျ။ သံကိုငျးတှနေဲ့ယှဥျရမယျဆိုရငျ ကျောကိုငျးဟာ ခြှေးစားခွငျးမရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ လူတှကေ ကျောကိုငျးကို ရှေးခယျြကွတာဖွဈပါတယျ။
ကျောကိုငျးတှဟောပေါ့ပါးကွပါတယျ။ကျောကိုငျးရဲ့ပေါ့ပါးမှုကွောငျ့ နှာဒေါကျကွောငျ့ နှာခေါငျးအရာထငျမှုကို လြော့ပါးစလေို့ရှေးခယျြကွတာပဲဖွဈပါတယျ။ ပေါ့ပါးမှုကွောငျ့ တပျဆငျထားရတာ သကျသောငျ့သကျသာရှိစပေါတယျ။
ကျောကိုငျးတှဟော မကျြမှနျတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးပစ်စညျးတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါကဘာလဲဆိုတော့ အရောငျမြားစှာ ပုံစံမြားစှာ ရနိုငျတယျဆိုတာကိုပွောတာပဲဖွဈပါတယျ။ကျောကိုငျးတှဟော Adjustလုပျရတာလှယျကူတယျ တာရှညျခံတယျ ခံနိုငျရညျရှိတယျ။ ဒီလိုအခကျြတှကေ အားကစားလုပျသူမြားအတှကျ ကောငျးမှနျသောရှေးခယျြမှုဖွဈစပေါတယျ။
အားကစားပွုလုပျသူဖွဈပွီး မကျြမှနျတပျဆငျဖို့ လိုအပျတယျဆိုလငျြ ကျောကိုငျးမကျြမှနျကိုတပျဆငျထားပါက ပေါ့ပါးစှာ အားကစားပွုလုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ကိုငျးက အပူရော အအေးရော ခံနိုငျရညျရှိပွီး တပျဆငျ ထားရတာ Flexibleဖွဈနစေမှောဖွဈပါတယျ။
ကျောကိုငျးတှဟော မကြိုးလှယျပါဘူး။ တခြို့ဆို ကှေးညှတျလို့ရပွီး ကှေးညှတျလိုကျပီးရငျတောငျ မူလပုံစံအတိုငျးပွနျရပါတယျ။
နကောပဲဖွဈဖွဈ ပါဝါပဲဖွဈဖွဈ၊ နကောပါဝါ ပဲဖွဈဖွဈ အစုံရှိလို့ ဘာပဲရှေးခယျြရှေးခယျြ
အလှသဈမကျြမှနျဆိုငျမှာ အခုပဲ ရှေးခယျြဝယျယူလိုကျတော့နျော
shop Now – glasses
သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် မျက်မှန်တွေဟာ ရွေးချယ်စရာများများရှိလာပြီးတော့ ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဈေးကွက်မှာရရှိလာပါပြီ။ ဒီထဲကမှ ကော်ကိုင်းမျက်မှန်တွေက ဘာလို့ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာလဲဆိုတာပါ။ ဒါကတော့ ဒီလိုရှိပါတယ်။ 😊
ကော်ကိုင်းတွေဟာ ဓာတုတိုက်စားမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ သံကိုင်းတွေနဲ့ယှဉ်ရမယ်ဆိုရင် ကော်ကိုင်းဟာ ချွေးစားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူတွေက ကော်ကိုင်းကို ရွေးချယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကော်ကိုင်းတွေဟာပေါ့ပါးကြပါတယ်။ကော်ကိုင်းရဲ့ပေါ့ပါးမှုကြောင့် နှာဒေါက်ကြောင့် နှာခေါင်းအရာထင်မှုကို လျော့ပါးစေလို့ရွေးချယ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပါးမှုကြောင့် တပ်ဆင်ထားရတာ သက်သောင့်သက်သာရှိစေပါတယ်။
ကော်ကိုင်းတွေဟာ မျက်မှန်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကဘာလဲဆိုတော့ အရောင်များစွာ ပုံစံများစွာ ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကော်ကိုင်းတွေဟာ Adjustလုပ်ရတာလွယ်ကူတယ် တာရှည်ခံတယ် ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေက အားကစားလုပ်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။
အားကစားပြုလုပ်သူဖြစ်ပြီး မျက်မှန်တပ်ဆင်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုလျင် ကော်ကိုင်းမျက်မှန်ကိုတပ်ဆင်ထားပါက ပေါ့ပါးစွာ အားကစားပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုင်းက အပူရော အအေးရော ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တပ်ဆင် ထားရတာ Flexibleဖြစ်နေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကော်ကိုင်းတွေဟာ မကျိုးလွယ်ပါဘူး။ တချို့ဆို ကွေးညွတ်လို့ရပြီး ကွေးညွှတ်လိုက်ပီးရင်တောင် မူလပုံစံအတိုင်းပြန်ရပါတယ်။
နေကာပဲဖြစ်ဖြစ် ပါဝါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေကာပါဝါ ပဲဖြစ်ဖြစ် အစုံရှိလို့ ဘာပဲရွေးချယ်ရွေးချယ်
အလှသစ်မျက်မှန်ဆိုင်မှာ အခုပဲ ရွေးချယ်ဝယ်ယူလိုက်တော့နော်
၈၃လမ်းx၃၄လမ်းထောင့် ၊မန္တလေးမြို့။းညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်။
ဆီးခြိုရောဂါကမကျြစိကိုထိခိုကျစနေိုငျလား? အပိုငျး (၁) အမွငျဝါးခွငျး